Sida Dib Loogu Gudbiyo Faylka Cusub ee Robots.txt | Martech Zone
Hay'addayada ayaa wax ka qabata la-tashiga raadinta dabiiciga ah dhowr iibiyeyaal SaaS ah oo ku yaal warshadaha. Macaamiil aan dhawaan bilownay inaan lashaqeyno wuxuu si ficil caadi ah u sameeyay, asaga oo dalabkooda dul dhigaya subdomain una wareejinaya bogooda buuga yar bogga aasaasiga ah. Tani waa waxqabad caadi ah tan iyo markii ay u saamaxeyso kooxdaada wax soo saarka iyo kooxda suuqgeynta inaad sameysid cusbooneysiin sida loogu baahdo iyadoon ku tiirsaneyn kan kale.
Tallaabadii ugu horreysay ee lagu falanqeynayo caafimaadkooda raadinta dabiici ah, waxaan ka diiwaangelinnay buug-yaraha iyo bogagga codsiga ee Webmasters-ka Taasi waa markii aan ogaanay arrin degdeg ah. Dhammaan boggaga dalabka waxaa laga horjoogsaday inay muujiyaan makiinadaha raadinta. Waxaan u gudubnay gelitaankooda robot.txt ee Maamulayaasha Webka isla markiina waan ogaannay arrinta.
Intii ay u diyaar garoobayeen socdaalka, kooxdooda horumarineed ma aysan dooneyn in arjiga subdomain lagu muujiyo raadinta, sidaas darteed way u diideen helitaanka aaladaha raadinta. Faylka robots.txt waa feyl laga helo xididka bartaada - yourdomain.com/robots.txt - taasi waxay u oggolaanaysaa mashiinka raadinta inuu ogaado iyo haddii kale inay gurguuranayaan goobta. Waxaad ku qori kartaa xeerar si aad ugu oggolaato ama u diiddo tusmeynta bogga oo dhan ama waddooyinka gaarka ah. Waxa kale oo aad ku dari kartaa xariiq si aad u sheegto faylka khariidada boggaaga.
The Robots.txt faylka wuxuu lahaa soo-gelinta soo socota taas oo ka horjoogsatay goobta inay gurguurto oo lagu muujiyo qiimeynta natiijooyinka raadinta:
Wakiilka isticmaale: * Uma oggola: /
Waxay ahayd in loo qoro sida soo socota:
Wakiilka Isticmaalaha: * U oggolow: /
Tan dambe waxay siisaa rukhsad mashiin kasta oo raadinta ah oo gurguurta bogga inay ka heli karaan galka ama faylka ku jira bogga.
Wanaagsan… markaa hadda kan robots.txt feylku waa qumman yahay laakiin sidee Google ku ogaanayaa goorma ayeyna fiirin doonaan barta mar kale? Hagaag, waxaad gabi ahaanba codsan kartaa in Google uu hubiyo robots.txt-kaaga, laakiin maahan mid caqli gal ah.
U soco Google Search Console Search Console si ay u Gurguurto> robots.txt Tijaabiyaha. Waxaad arki doontaa waxyaabaha ku jira feylashii ugu dambaysay ee gurguurad ah ee 'robots.txt' gudaheeda Tijaabiyaha. Haddii aad jeceshahay inaad dib u soo gudbiso faylkaaga robots.txt, guji Gudbi oo popup ayaa la imaan doona xulashooyin kooban.
Xulashada ugu dambeysa ayaa ah Weydiiso Google inay cusbooneysiiso. Dhagsii badhanka gudbinta buluuga ah ee ikhtiyaarkaas ka dibna dib ugu laabo Gurguurto> robots.txt Tijaabiyaha ikhtiyaarka menu si aad dib ugu buuxiso bogga. Waa inaad hadda aragtaa feylka la cusbooneysiiyay ee robots.txt oo ay la socoto shaabad taariikh ah oo muujineysa inay mar kale gurguuratay.
Haddii aadan arkin nooc la cusbooneysiiyay, waad gujin kartaa gudbinta oo xulo Eeg nooca la soo raray si aad ugu socoto faylkaaga dhabta ah ee robots.txt. Nidaamyo badan ayaa kaydin doona faylkan. Xaqiiqdii, IIS waxay soo saartaa feyl ahaan si firfircoon iyadoo lagu saleynayo xeerarka lagu soo rogay adeegsigooda adeegsigooda. Waxay u badan tahay inaad cusbooneysiiso xeerarka oo aad cusbooneysiiso keydka si aad u daabacdo feylal cusub oo robots.txt ah.
Tags: google webmastersaaladorobots.txtfaylka robots.txtSEOmacalimiin